कस्तो चोर ! दिसा गर्दा पनि सुन नै बरामद हुने !! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
कस्तो चोर ! दिसा गर्दा पनि सुन नै बरामद हुने !!
काठमाडौं । दिसा गरेपछि नै सुन निस्केपछि त्यो प्राणी कस्तो होला । तर आश्चर्य नमान्नुस यस्तै खबर छ, सुन चोरी आरोपमा जेठ १७ गते पक्राउ परेका चोरको दिसाबाट प्रहरीले सुन बरामद गरेको छ ।
पक्राउ परेका मध्ये काजनारायण चौधरीले सुन खाएका थिएनन् भने बाँकी तीन जनाले सुन खाएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । बजार र भिडभाडमा सुन लुट्ने योजना बनाएर इटहरीबाट को१ज २६५७ नम्बरको रातो रंगको गाडी लिएर यो गिरोह खाँदबारी पुगेको थियो ।